बजार Archives – Satabdi News
शाओमीको रेड्मी १० नेपाली बजारमा सार्वजनिक
१६ जेठ,काठमाडौं | शाओमीले नेपाली बजारमा रेड्मी १० सार्वजनिक गरेको छ। स्मार्टफोनको बजारमा हुने चुनौतिलाई मध्यनजर गर्दै सस्तो दरमा उत्कृष्ट उत्पादन ल्याउने लक्ष्यका साथ शाओमीले रेड्मी १० सार्वजनिक गरेको हो। नयाँ फोन सार्वजनिक गर्दै शाओमी नेपालका महाप्रबन्धक अमित कुमार पंडाले भने, 'हाम्रो लागि उपभोक्ता नै हाम्रो केन्द्रबिन्दु हो। जसले गर्दा
२४, फाल्गुन काठमाडौं । नेष्डो समृद्ध लघुवित्तको आइपीओ मंगलबार बाँडफाँट भएको छ । यस आइपीओमा गोलाप्रथामार्फत ७७ हजार ४५६ जना सर्वसाधारण आवेदकले सेयर हात पारेका छन् । जसमध्ये ७७ हजार ४५३ जनालाई १० कित्ता र ३ जनाले ११ कित्ताका दरले सेयर पाएका छन् । बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका अनुसार
२३ फाल्गुन, काठमाडौं । अब युट्युव च्यानलसहित इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणका लागि समेत इजाजतपत्र लिनुपर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रशारण –एघारौं संशोधन) नियमावलीमा, २०७८ जारी गर्दै इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणको नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो । नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने युट्युवलगायत विभिन्न ‘ओटीटी
आज अन्तिम दिन नेष्डो समृद्ध लघुवित्तको आइपीओ भर्ने
१५ फाल्गुन, काठमाडौं । नेष्डो समृद्ध लघुवित्तको आइपीओमा आवेदन दिने आज आइतबार अन्तिम दिन हो । यसमा आज कार्यालय समयसम्म आवेदन दिन पाइनेछ । नेष्डोले फागुन ११ गतेबाट आइपीओ खुला गरेको हो । यसमा मागभन्दा बढी आवेदन परिसकेको छ । बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका अनुसार गत शुक्रबार फागुन १३
इमर्जिङ नेपालको आईपीओको बाँडफाँड
४ फाल्गुन, काठमाण्डौ । इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडको आईपीओ आज बुधबार बाँडफाँड गरिएको छ। धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक एनआईसी एसिया क्यापिटल लिमिटेडले आज दिउँसो ३ः३० बजे एक कार्यक्रमबीच इमर्जिङ नेपालको बाँडफाँड गरेको हो। आईपीओ बाँडफाँड कार्यक्रम काठमाण्डौको बिजुलीबजारस्थित कार्निभल रेष्टो एन्ड मिटिङ्समा गरिएको छ। यो कम्पनीले गत माघ २६ गतेबाट फागुन १
नेपालमा आफ्नै डिजिटल करेन्सी निकाल्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको तयारी
४ फाल्गुन, काठमाडौँ । निजीक्षेत्रबाट आएको क्रिप्टो करेन्सी सम्बन्धमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले भने आफ्नै डिजिटल करेन्सी (विद्युतीय मुद्रा) निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । हाल राष्ट्र बैंकले सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) को सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ, जुन अन्तिम चरणमा पुगिसकेको बताइएको छ । राष्ट्र
भर्ने होइन ? राष्ट्र उत्थान लघुवित्तको आजदेखि आइपीओ खुल्ला
४ फाल्गुन, काठमाडौं । राष्ट्र उत्थान लघुवित्तको आइपीओ आज फागुन ४ गते बुधबारबाट बिक्री खुला भएको छ । लघुवित्तले ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको आइपीओ जारी गरेको हो । प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा राष्ट्र उत्थानले ८ लाख ५० हजार कित्ता आइपीओ जारी गरेको छ । यसमध्ये ४२
विद्युतीय सवारी साधनको बिक्री एक वर्षमै बढ्यो १०९%
३ फागुन, काठमाडौं । विश्वभर विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) को बिक्रीमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । सन् २०२१ मा मात्र विश्वभर ६५ लाख वटा विद्युतीय सवारीसाधनको बिक्री भएको एक तथ्यांकले देखाएको छ । बजार अनुसन्धान गर्ने कम्पनी ‘क्यानलिस’ का अनुसार सन् २०२० को तुलनामा इभीको बिक्री १०९% ले वृद्धि भएको हो
दुधको मुल्य बृद्दि भएसंगै कृषकमा केही खुशी
२८ माघ, काठमाडाैं । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले दूधको उपभोक्ता मूल्य बढाएको छ । हिजाे पत्रकार सम्मेलन गर्दै डीडीसीले प्रतिलिटर दूधको मूल्य नौ रूपैयाँ बढाइएको जनाएको हो । यसअघि दूधको उपभोक्ता मूल्य प्रतिलिटर ७६ रहेकोमा शुक्रबार (आजदेखि) बढेको मूल्य लागु भएर प्रतिलिटर ८५ रूपैयाँ हुने भएको छ । डीडीसीको
भर्ने होइन त ? इमर्जिङ नेपालको आइपीओ बिक्री खुला
२६ माघ, काठमाडौं । इमर्जिङ नेपालले आज बुधबार माघ २६ गतेबाट आइपीओ बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँको दरमा ५ लाख ५५ हजार ६०० कित्ता आइपीओ निष्कासन गरेको हो । यो मध्ये २% अर्थात् ११ हजार ११२ कित्ता सेयर कर्मचारी र ५% अर्थात् २७ हजार ७८० कित्ता